आसिफ र जोरालाई ‘विश्राम’ ! | Hamro Khelkud
आसिफ र जोरालाई ‘विश्राम’ !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका दुई ब्याट्सम्यान आसिफ शेख र सन्दीप जोरा नेपाली यू-१९ टोलीमा नपर्नुको कारण प्रमुख प्रशिक्षक विनोद दासले खुलाएका छन् ।
मलेसियामा हुने एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगिताको लागि नेपालले मंगलबार रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा १४ सदस्य टोली घोषणा गरेको थियो। जसमा तीन नयाँ खेलाडीले पहिलो पटक यू१९ टोलीमा स्थान बनाए । यू-१६ टोलीका कप्तान विशाल विक्रम केसी, लेग स्पिनर तिलक भण्डारी र युवा ब्याट्सम्यान तथा विकेटकीपर खडक बोहोरा पहिलो पटक यू१९ टोलीमा परे ।
दुई महिनाअघि यू-१९ विश्वकप छनोटमा रहँदै टोलीको कप्तानी समेत गरिसकेका विकेटकीपर ब्याट्सम्यान आशिफ शेख, सिनियर टोलीबाट खेल्दै टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा विश्व कीर्तिमान रचेका सन्दीप जोरा, घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने स्पिनर सुर्य तामाङ र शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान अभिषेक बस्नेत मंगलबार घोषित टोलीमा अट्न सकेनन् । बुधवार अभ्यासको क्रममा टियु क्रिकेट मैदानमा व्यस्त रहेका प्रशिक्षक विनोद दासले हाम्रोखेलकुदसँग कुरा गर्दै सन्दीप जोरा र आशिफ शेख टोलीमा नपर्नुको कारण प्रष्ट पारेका छन् ।
‘सन्दीप र आशिफले लगातार ३-४ वर्षदेखि उमेर समूहको क्रिकेट खेलिरहेका छन् । जोरा सिनियर टिममा परिसक्यो । आशिफले पनि घरेलु क्रिकेटमा राम्रो छवि बनाई सकेको छ । मलाई के लाग्यो भने उनीहरुलाई विश्राम दिएर नयाँ युवा खेलाडीलाई मौका दिने यो सहि समय हो,’ प्रशिक्षक दासले भने। यो समय युवा खेलाडीलाई मौका नदिए एसिया कपपछि नेपाली यू-१९ टोलीमा अनुभवी खेलाडीको कमी हुने दास बताउँछन् ।
‘जोरा र आशिफको उचित विकल्प पनि हामीसँग अहिले टोलीमा थियो । त्यहि भएर हामीले अहिले नै विश्राम दिनु उचित ठान्यौं । एसिया कपसम्म पर्खनुभन्दा अहिले नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिँदा उनिहरुके केहि अनुभव बटुल्छन र आगामी प्रतियोगितामा राम्रो प्रर्दशन गर्छन्,’ उनले भने । सन्दीप र आशिफलाई टिमबाट निकालिएको नभएर विश्राम दिइएको दासले बताए ।
‘खराब प्रर्दशन कारण होइन । जोराको त्यति खराब प्रर्दशन पनि छैन । हो, उनले विश्वकप छनोटमा राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेनन् । टि-२० विश्वकप छनोटको लागि सिनियर टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा पनि रहेकाले जोरालाई छाड्नु उचित ठान्यौं । आशिफले विश्वकप छनोटमा तीन खेलमा मात्रै पाएको थियो । विकल्प पनि रहेकाले उनलाई विश्राम दियौं,’ युवा खेलाडीलाई मौका दिन यो कदम चालिएको दासले प्रष्ट पारे ।
‘नयाँ खेलाडीहरुले मौका पाएका छन् । आगामी दुई वर्ष अर्थात सन् २०२२ को यू-१९ विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ अहिलेदेखि नै टिम निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छौं । यू-१६ प्रतियोगिता र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेकालाई भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै मौका दिने निर्णय लियौं,’ प्रशिक्षक दासले थपे । सन् २०२२ को यू-१९ विश्वकप खेल्ने हो भने अहिलेदेखि नै नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिंदै लैजानुपर्ने दासको तर्क छ । यस पटक नेपाली टोलीको सबैभन्दा बलियो पक्ष ब्याटिङ रहेको र उपाधि जित्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
मलेसियामा जुलाई २ देखि १० सम्म चल्ने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नेपाल आइतबार त्यसतर्फ लाग्दैछ । समुह ‘ए’ मा रहेको नेपालले सिंगापुर, म्यानमार र चीनसँग समुह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । त्यस्तै समुह ‘बी’ मा हङकङ, थाईल्यान्ड, भुटान र आयोजक मलेसिया छन् । नेपालले पहिलो खेल जुलाई २ मा म्यानमारसँग खेल्ने छ । त्यस्तै ५ जुलाईमा सिंगापुर, ६ जुलाईमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । दुवै समूहका शीर्ष दुई टोलीले जुन ८ मा हुने सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनलमा ९ जुलाईमा हुने छ ।
यस प्रतियोगिताको विजेता टोलीले २८ अगस्ट देखी ८ सेप्टेम्बरसम्म श्रीलंकामा हुने एसिया कप खेल्न पाउने छ । प्रतिस्पर्धीहरु हेर्दा नेपाल यस प्रतियोगिताको प्रमुख दाबेदार टोली मानिन्छ । यस प्रतियोगिताको विजेतासँगै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, यूएई र कुवेतले एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।